Wish.com Kubatanidzwa - Amazon, Ebay, Allegro uye Etsy ine Propars E-export
Kurongeka uye Kudzoka Management
ERP / Accounting Kubatanidzwa
E-kutumira kunze kwenyika
Edza iyo Mahara
Login Tanga ikozvino!
Taura nesu: 0 850 532 44 61
Zviri nyore kubata yako.com.com chitoro nePropars! [Beta]
Kutanga kutengesa pane zvaunoda nePropars uye rega zvigadzirwa zvako zviende kutengesa pasirese!
Yako E-Commerce Saiti
Yako ERP Chirongwa
Zvigadzirwa uye Orders
Zvigadzirwa / Orders Misika
E-kutumira kunze kuri nyore kwazvo nePropars inoshuvira kusangana!
Masheya ese anoteedzerwa otomatiki. Mutengo uye shanduko yemasheya zvinoratidzwa ipapo ipapo
Mirairo yako kubva pane zvaunoda inounganidzwa pachiratidziro chimwe chete nemamwe maoda ako ese.
Unogona kuisa zvigadzirwa zvako kuPropars muhuwandu neExcel kana XML.
Unogona kutengesa zvigadzirwa zvaunowedzera kuPropars pane wish.com nekamwe chete.
Mirairo yako kubva ku wish.com inounganidzwa pachiratidziro chimwe chete nemamwe maoda ako ese.
Gadzira zvakawanda kuwedzeredza pane zvigadzirwa.
Gadzira emahara e-invoice yemirairo yako nekudzvanya kamwe chete
Manage e-commerce pane imwechete skrini nePropars Marketplaces Kubatanidzwa
Easy Chigadzirwa kupinda: Iwe unogona kuwedzera zvigadzirwa zvaunowedzera kuPropar kuzvitoro zvako mumisika yese panguva imwe uye wovhura kuti zvitengeswe.
Otomatiki mari shanduko: Unogona kutengesa zvigadzirwa zvako zvinotengeswa nemari yekunze mumisika yeTurkey muTL, uye unogona kutengesa zvigadzirwa zvako muTL nemitengo yakasiyana yekutsinhana munyika dzakasiyana.
Yekukurumidza Sisitoko uye Kuvandudza Kwemutengo: Iwe unogona ipapo kutarisa zvitoro zvako uye zvitoro zvenyama pane makuru epasirese e-commerce saiti Amazon, eBay uye Etsy. Mune mamwe mazwi, kana iwe uchitengesa chigadzirwa muPropars muchitoro chako chenyama uye uchinge wapera, chigadzirwa chinovharwa otomatiki kutengeswa muchitoro chiri muAmazon France panguva imwe chete.
Mamwe misika: Misika muTurkey uye misika inotungamira pasi rose, Propars, iri kuramba ichiwedzerwa kumisika iripo uye munyika itsva.
Izvozvi: Zvitsva zvinogadzirwa mumisika zvinoteverwa nePropar uye zvinowedzerwa kuPropar.
Mutengo Wakawanda: Nekugadzira mapoka emitengo, unogona kutengesa mune chero musika nemutengo waunoda.
Feature manejimendi: Iwe unogona kubata zviri nyore izvo zvinodikanwa zvigadzirwa mumisika nePropar.
Chigadzirwa Sarudzo: Unogona kuendesa zvigadzirwa sarudzo semuvara uye saizi kumisika yese nekutsanangura mafoto akasiyana nemitengo yakasiyana.
Propars Inowanzo bvunzwa mibvunzo
Chii chinonzi Propars?
Propars chirongwa chekusimudzira-chekutengeserana chinogona kushandiswa nechero bhizinesi rinotengesa. Iyo inochengetedza mabhizinesi kubva kushandisa akasiyana mapurogiramu ezvavanoda zvakasiyana, uye inochengetedza mabhizinesi nguva nemari. Kutenda kune ayo akawanda maficha senge stock manejimendi, pre-accounting manejimendi, kurongeka uye manejimendi manejimendi, mabhizinesi anogona kuzadzisa zvese zvavanoda pasi peimwe denga.
Ndezvipi zvinhu zvine maPropars?
Propars ine Inventory Management, Kutenga Management, Accounting Management, E-commerce Management, Order Management, Kwevatengi Kutaurirana Management maficha. Aya ma module, rimwe nerimwe rayo rakazara zvakakwana, rakagadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nemaSMEs.
Zvinorevei E-Commerce Management zvinorevei?
E-commerce manejimendi; Zvinoreva kuti iwe unosvika mamirioni evatengi muTurkey nepasirese pasirese nekuunza izvo zvigadzirwa zvaunotengesa mubhizinesi rako kune internet. Kana iwe uine maPropar newe, usazeze, e-commerce manejimendi iri nyore kwazvo nePropars! Propars inogadzira akawanda eanodiwa maitiro uye inokubatsira iwe kubudirira kubudirira mu e-commerce.
Ndeapi ma e-commerce chiteshi izvo zvigadzirwa zvangu zvichatengeswa nePropars?
Mumisika mikuru yedhijitari umo vatengesi vazhinji vakaita seN11, Gittigidiyor, Trendyol, Hepsiburada, Ebay, Amazon neEtsy vanotengesa zvigadzirwa zvavo, maPropars anoisa zvigadzirwa zviripo nekutengesa kamwe chete.
Ndinoendesa sei zvigadzirwa zvangu kuPropars?
Kuti zvigadzirwa zvako zvikwanise kutengeswa mumisika zhinji yeinternet, zvinokwana kuendesa kuPropars kamwe chete. Kune izvi, mabhizinesi madiki ane mashoma zvigadzirwa anogona nyore kupinda zvigadzirwa zvavo vachishandisa Inventory Management module yePropars. Mabhizinesi ane zvakawanda zvigadzirwa anogona kuisa XML mafaera ane chigadzirwa ruzivo kuPropars uye kuendesa zviuru zvezvigadzirwa kuPropars mumasekondi mashoma.
Ini ndinotanga sei kushandisa Propars?
Iwe unogona kukumbira yemahara muedzo nekudzvanya iyo 'Edza Yemahara' bhatani mukona yepamusoro yekurudyi peji rega uye nekuzadza fomu rinovhura. Paunogamuchira chikumbiro chako, mumiriri wePropars anokufonera nekukasira uye unobva watanga kushandisa maPropars mahara.
Ndatenga pack, ndogona kuichinja gare gare?
Hongu, unogona kushandura pakati pemapakeji chero nguva. Kuti uenderere mberi nekuchinja kuri kudikanwa kwebhizinesi rako, ingodaidza maPropars!
Tengesa Pasi Pose Tora Zvakawanda!
NePropars, tanga kutengesa nekudzvanya kumwe chete mumisika yepasi rose seAmazon, Ebay uye Etsy!
Manage maodha kubva kune imwe skrini
Unganidza maodha ako ese pachiratidziri chimwe, invoice nekudzvanya kumwe chete! Inogona kuburitsa e-invoice muhuwandu hwemirairo inouya kubva kumisika nzvimbo uye yako e-commerce saiti; Unogona kudhinda fomu rakawanda rekutakura zvinhu.
Nekuisa zvigadzirwa zvako kuPropars kamwe chete, unogona kuzvitengesa pane ese masaiti nekudzvanya kamwe chete.
Haufanire kunetseka nekutumira zvakasiyana pachinhu chimwe nechimwe chigadzirwa. Zviuru zvezvigadzirwa zvichange zvichitengeswa mumasekondi mashoma pazvitoro zvaunosarudza.
Regai isu tikubatsire iwe kusarudza.
Ndokumbira ufonere mumiriri wevatengi nezve edu mapakeji.
Propars ndeyeTurkey chete uye yepasirose inotungamira mhinduro yeE-EXPORT. Ndiyo mubatsiri webasa reAmazon, Ebay, Etsy uye Payooner. Inotsigirwa neKOSGEB neTürk Telekom.
© 2020 Propars. Kodzero dzose dzakachengetedzwa.
Sravana Sameeralu Serial XNUMXth Turkey Integrations
e-inivhoyisi & e-Archive